OnePlus dia hanome antoka ho an'ny telefaona nafarana avy any Sina | Androidsis
Iray amin'ireo ahiahy lehibe indrindra ho an'ireo mpampiasa rehefa mividy telefaona avy any Shina ny fiantohana. Amin'ny tranga maro dia zara raha misy antoka raha sendra olana amin'ny fitaovana. Fantatry ny OnePlus izany, saingy mitady hampiditra fanovana izy ireo amin'ity lafiny ity. Satria ny marika dia manome antoka ihany koa ho an'ireo telefaona izay nafarana avy any Shina.
Fantatra fa ny orinasa manome antoka maharitra herintaona ho an'ireo mobiles novidina avy any Shina, amin'ny import. Ka raha misy smartphone OnePlus novidiana avy any Shina dia tsara ny fahalalana fa hisy antoka toy izany. Raha sendra olana amin'ny fitaovana dia azonao atao ny mandeha any amin'ny marika ihany.
Zavatra tsy mahazatra eo amin'ny tsena izy io, fa ny OnePlus ihany no manamafy fa marina izany. Ka vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa mikasa ny hividy ny iray amin'ireo mpanamboatra fitaovana malaza avy any Shina ity. Na dia tsy maintsy tadidinao aza izany ny telefaona novidiana tany Eropa dia manana antoka roa taona.
Tsara ny fahalalana fa misy izany mety hitranga. Raha amin'ny tranga maro ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny dia tsy dia lehibe loatra mba hahatonga azy io vidiana lafo any Chine. Indrindra fa amin'ny tranga sasany dia mety misy vidiny fanampiny ho an'ny ladoany, izay mahatonga ny telefaona ho lafo kokoa amin'ny farany.
Ny OnePlus dia lasa iray amin'ireo marika vitsivitsy izay Manolotra antoka ho an'ny fividianana avy any Shina koa izy ireo. Vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa vao nividy maodely na mieritreritra ny hanao izany. Na dia amin'ny fotoana rehetra aza dia tsy maintsy manantona magazay azo itokisana ianao, izay mivarotra amin'ny fomba ofisialy ireo finday marika.
Ny marika sinoa dia manana fotoana mahafinaritra, miaraka amin'ny valiny tsara an'ny avo lenta vaovao, ny OnePlus 7 Pro, izay manana kinova manokana voafetra efa natomboka tany Espana tato ho ato. Sehatra avo lenta antsoina hoe fahombiazan'ny varotra, izay hanampy ny orinasa amin'ny fanitarana iraisam-pirenena. Ahoana ny hevitrao momba ity fanapahan-kevitra ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus dia hanome antoka ho an'ny telefaona nafarana avy any Shina